Mafirimu akanakisa anobva pamabhuku: Ndeapi ari TOP? | Zvazvino Zvinyorwa
Mafirimu akanakisa anobva pamabhuku
Alberto Makumbo | | Mabhuku, Literature, dzakawanda
Kana isu tichifunga nezvehumwe hunyanzvi hwemabhaisikopo, mazhinji acho ane chikamu chekwaniso yavo kune enganonyorwa kana nyaya dzavakafemerwa. Yashandurwa kuita inowedzera kudzokorodza muunyanzvi hwechinomwe, mafirimu anoenderana nemabhuku akabudirira achiwedzera kuzadza mabhodhi, achipa izvi mafirimu akanakisa anobva pamabhuku chii chaunofanira kuona.
1 harry muumbi uye dombo reMuzivi
2 Uraya Mockingbird
4 Kunyarara kwemakwayana
5 hupenyu hwaPi
6 American psycho
8 kuenda nemhepo
9 Kusungwa hupenyu
10 Dhayari yaBridget Jones
harry muumbi uye dombo reMuzivi
MunaNovember 2001, nguva pfupi pamberi pekusvika kweimwe huru adaptation iyo Ishe wemhete, iyo firimu vhezheni yekutanga yenhau yesaga yakaburitswa pasireseHarry Potter, pandakangopedza bhuku. Ndinoyeuka baba vangu vakaiverenga zvakare, uye rimwe Zuva reGore Idzva takaenda kunozviona. Baba vangu, muverengi anoverengeka uye azere nemashefu emabhuku, vakandiudza kuti ichi ndicho chimwe cheiyo akanakisa magadzirirwo Ndakanga ndaona. Uye aive akarurama. Nekuti kunyangwe akasiya imwe nzira isingakuvadzi, yekutanga sinema Harry Potter aiziva kubata zvakaringana zvakasikwa zveJKRowling: kubva mungano Hogwarts kune vechidiki vatambi mune yenyasha. Chikamu chekutanga chakateverwa nevamwe icho, pamwe nezvakakwana pamwe nezvakawanda, zvaive zvakafanirawo kugadziridzwa kwe iyo huru yekunyora franchise mumakore apfuura.
Inofungidzirwa imwe yeiyo makuru makuru ezana ramakore rechimakumi maviri, Uraya Mockingbird naHarper Lee kwaive kutarisa kwakakodzera pazvinhu zvakaita sekusarurana kana machismo mukutenderera kuzere muma60. Chigadzirwa chakave chakasimudzirwa naRobert Mulligan film adaptation yakaburitswa muna 1960 yakaratidza Gregory Peck saAtticus Finch, gweta revarungu vakapomerwa mhosva yekudzivirira munhu mutema achipomerwa kubata chibharo. Iyi firimu, rakabudirira kwazvo pakutanga kwayo, yaive akadomwa ma Oscars masere, kuhwina mibairo yeYakanakisa Actor yePeck, Akanyanya Adapted Screenplay uye Akanakisa Art Direction.
Kunyangwe Steven Spielberg akabatanidza mavara maviri kubva mubhuku raMichael Chrichton rakakurumbira uye asina hanya nechikamu chidiki chine hukama neimwe yemadinosaurs, hapana munhu anogona kuramba kuti zvakaitika muna 1993 zvaizochinja nhoroondo yemamuvhi zvachose. Kuvimba nevamwe handina kumboona zvakakosha pahwindo, iyo inonzi "King Midas" yeHollywood yakaburitswa naJurassic Park imba, akaunganidza mamirioni emadhora uye akachinja hwaro hwe blockbuster nguva yezhizha ichienda kune Isla Nublar uko vavariro yemunhu yakakonzera kumutswa kweT-Rex, velociraptor nevamwe vatsoropodzi vaive vakasununguka vachikonzera kutya. Zvakakosha.
Ungada here kuverenga Jurassic Park naMichael Chrichton?
Muna 1981 na1988, munyori Thomas Harris akaburitsa Tsvuku Dhiragoni uye Kunyarara kweGwayana zvichiteerana, ese ari maviri mabasa akatarisana nehunhu hwe Hannibal lecter, chiremba wepfungwa akapiwa kudya kwevanhu. Iye uyo pasina mubvunzo ari mumwe we mapenzi makuru emabhuku akaendeswa kubhaisikopo zvine hunyanzvi hwakafanana mufirimu ra1991 raitamba naAnthony Hopkins muchinzvimbo chaLecter naJodie Foster semumiriri weFBI Clarice Starling, akapiwa basa rekutevera mhondi yekupedzisira yainzi Buffalo Bill nebasa rake raanotsamira pane anodya nyama. 5 Oscar anokunda, Kunyarara kwemakwayana inoenderera kuve imwe yeiyo inofanirwa-kuve nematepi kubva kuma90s kune vanoda cinema yakanaka.
Mafirimu mazhinji anokwanisa kuve akatendeka kunyaya nyaya dzavari uyezve, vanounza hunhu hwavo kune yakasetwa. Izvi ndizvo zvakaitika na hupenyu hwaPi, kuchinjika kwebhuku naCanada Yann Martel kutanga muna 2012. Nekuti kunyangwe paakasvetuka chetatu chebhuku chakanangana nekutenda uye hupenyu hwemudiki Indian protagonist, firimu raAng Lee rakakwanisa kudzokororazve odyssey ye Pi uye Tiger Richard Parker mungarava muchitsamira pamhedzisiro mhedzisiro iyo yakagadzirisazve kubhururuka marwenga nemakungwa anopenya. Yaive ipapo iyo, kwekanguva, vazhinji vedu takafunga zvakare kuti tanga tiri kutarisa firimu iri nani pane iro bhuku raakafuridzirwa naro.
Chibereko chemakapitalist uye narcissistic nzanga, inovavhisi American Psycho rakanyorwa naBret Easton Ellis rakaburitswa muna 1991 rakatumirwa kuratidza a yuppie psychopath uyo anosanganisa basa rake semunhu ane simba weNew York muzvinabhizimusi mukati mehusiku nehusiku hwehusiku hunopera muropa nekupopota. Iri basa rine kugadziridzwa kwegore 2000 harina kungoshanda chete kukwidziridza rakanakisa Christian Bale saPatrick Bateman, asi kutinyevera nezve njodzi yenzanga umo chinamato chemuviri, kutenga vatengi nesimba rinogadzira nzvimbo iyo nzira yavo yekuzadza inogona kutungamira kumhinduro dzakaipisisa.
Inofungidzirwa nevazhinji kuve imwe ye matepi akanakisa enguva dzese, The Godfather naFrancis Ford Coppola, zvinoenderana neanozivikanwa mazita naMario Puzo uye yakaburitswa muna 1972, yakauya kuzotizivisa kumhuri yeItari -America yematsotsi kubva ivo Corleones, yakanyorwa zvakanyanya neVito inoridzwa na Marlon Brando uye mwanakomana wake Michael pasi peganda raAl Pacino. X-ray yemakumi emakumi emakore makumi mana nemakumi mashanu akaratidzirwa neiyo mafia chiitiko cheEast Coast yeUnited States, iyo tepi 3 Oscar anokunda Ini ndakagadzira chikamu chechipiri chakafungidzirwa nevazhinji kunyange chakanyanya kukunda icho chakatangira uye chechitatu chakaburitswa muna 1990. Pasina kupokana, imwe yeiyo akanakisa mafirimu akavakirwa pamabhuku enguva dzese.
Iwe hausati waverenga Mwari wacho?
Kunyangwe hazvo mazuva ano mafirimu achichinjika akavakirwa pamabhuku ari anowanzoitika, kumashure muma30s iyi yaive tsika yakangwara kwazvo. Zvichida ndicho chikonzero nei achibatanidza kuburitswa kwebhuku rebudiriro senge iro rakanyorwa nemunyori Margaret Mitchell rakaburitswa muna 1936 neHollywood blockbuster ya1939 yakaita zita rekuti «kuenda nemhepo«Zvichakukurwa. Iyo bhaisikopo, 10 Oscars Mubairo Unohwina Starring Clark Gable naVivien Leigh, inotaurira nyaya yemurionea wechidiki anobva kumaodzanyemba kweUnited States uye odyssey yake kuti afambire mberi mumazuva eAmerican Civil War.
Kubva pane pfupi pfupi Rita Haywoth uye kuregererwa kwaShawshank inosanganisirwa mukuunganidzwa Mwaka mina naStephen King, Cadena Perpetua akaburitswa muna 1994, pakarepo achiva yakasarudzika kubva kuma90s cinema. Nyeredzi Tim makororo, iyo firimu inorondedzera mutongo weupenyu webhangi achipomerwa mhosva yekuponda mukadzi wake nemwanasikana uye anoti haana mhosva. Rwendo kuburikidza nehupenyu hwejeri umo, kana iwe ukangopinda, hapana chakafanana zvakare.
Dhayari yaBridget Jones
Mukupera kwema90, fungu rechikadzi rakatora nyika muchimiro chezviteedzana seBonde neGuta kana mabhuku senge Dhayari yaBridget Jones de Helen akamira. Tichifunga nezvekurema kupfuura makumi matatu-chimwe chinhu uye nekusina rombo nevarume, iyo novel yakagadziriswa muna 2001 na Renée Zellweger sezvo protagonist uye Colin Firth naHugh Grant sevamiriri vekuda izvi kuchinjika kwazvino kwekuzvikudza uye kufungira zvisizvo iro bhokisi remahofisi akabudirira rakaburitsa maviri madiki asi zvakaenzana kuita sequels.
Ndezvipi, mumaonero ako, akanakisa mafirimu anoenderana nemabhuku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mafirimu akanakisa anobva pamabhuku
Goethe. Kurangarira baba veGerman Romanticism
Iyo Phoenix yezvigayo, yekusingaperi Lope de Vega. 5 sonnets